ချက်သမ္မတနိုင်ငံ၊ အထက်လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ H.E.Mr. Jan Hornik နှင့်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ – Yangon Hluttaw
Home / ပြန်ကြားရေး / ချက်သမ္မတနိုင်ငံ၊ အထက်လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ H.E.Mr. Jan Hornik နှင့်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ချက်သမ္မတနိုင်ငံ၊ အထက်လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ H.E.Mr. Jan Hornik နှင့်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
Ygn Editor February 14, 2020	ပြန်ကြားရေး, သတင်း Comments Off on ချက်သမ္မတနိုင်ငံ၊ အထက်လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ H.E.Mr. Jan Hornik နှင့်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ 61 Views
ရန်ကုန် ၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၃ ရက် ၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်
၁၃.၂.၂၀၂၀ ရက်နေ့ နံနက် (၀၈:၀၀) နာရီအချိန်တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး၊ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌရုံးခန်းမ၌ ချက်သမ္မတနိုင်ငံ၊ အထက်လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ H.E.Mr. Jan Hornik နှင့်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်မောင်ထွန်း၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးလင်းနိုင်မြင့်၊ ပြည်သူ့ငွေစာရင်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင့်လွင်၊ ဥပဒေကြမ်းကော်မတီ အဖွဲ့ဝင် ဦးသော်တာအောင်၊ ပို့ဆောင်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် စက်မှုလက်မှုရေးရာ ကော်မတီအဖွဲ့ဝင် ဦးသန်းနိုင်ဦး၊ လူမှုရေးနှင့်စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ အဖွဲ့ဝင် ဦးနေမျိုးကျော်(ခ) နေဘုန်းလတ်နှင့် လွှတ်တော်ရုံးအကြီးအမှူး ဒေါ်သီသီနွယ်တို့ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
Next ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံကလေးများနေ့အခမ်းအနားကျင်းပ